नेपालमा पहिलो पटक मानिसमा ‘बर्ड फ्लू’, एक जनाको ज्यान गएको पुष्टि
Posted on May 3, 2019 by Farm Nepal
काठमाण्डौ – बर्डफ्लूको संक्रमणका कारण एकजनाको ज्यान गएको छ । चरा र कुखुरालगायत पंक्षीमा देखिएको बर्डफ्लू मानिसमा पनि सरेको पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काभ्रेका २१ वर्षीय एक युवकको बर्डफ्लू (एच फाइब एन वान) बाट ज्यान गएको पुष्टि भएको हो । ज्वरो र खोकी लागेर अस्पताल पुगेका उनलाई इन्फ्लुएन्जाको औषधि दिइएको थियो । तर उनको श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर गएको चैत १५ गते नै ज्यान गएको थियो ।
बिरामी भएर उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएका ती युवकको र्‍यालको परीक्षण पछि उनलाई बर्ड फ्लू भएको भन्ने पुष्टि भएको हो ।
नेपालमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको यो पहिलो घटना हो । घटनाकाे जानकारी गराउन बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो । मृतकको नाम भने खुलाइएको छैन । घटनापछि स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले अप्रत्यासित घटना भएकाे बताउनुभएको छ ।
कसरी सर्छ बर्ड फ्लू ?
बर्ड फ्लू संक्रमित पंक्षीहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा यो भाइरस स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छ । रोगी पक्षीको मासु, अन्डा, सुलीलगायत बाहिर निस्किने पदार्थबाट रोग सर्छ । मासु चलाउँदा वा खोरमा काम गर्दा पनि रोग सर्छ ।
फिरन्ते चराको सम्पर्कबाट स्थानीय चरामा बर्ड फ्लू सर्छ। बर्ड फ्लू का भाइरस एउटा मानिसबाट अर्कोमा सरेको तथ्य भने अहिलेसम्म भेटिएको छैन । तर पंक्षीबाट मानिसमा भने सर्ने गर्छ ।
यसबाट बच्ने केही उपायहरु
– रोगको प्रकोप भएको ठाउँमा सकेसम्म नजाने ।
– मरेका पंक्षीलाई सोझै नछुने वा नचलाउने । नजिक जानु परेमा पनि माक्स लगाएर जाने ।
– रोग लागेका पंक्षीबाट जोगिने ।
– कुखुराको मासु खान रोक लगाउने ।
– कुखुराको मासु, अण्डा खानै परेमा राम्ररी पकाएर मात्रै खाने ।
पलायन हुँदै कुखुरापालक किसान, अण्डा बिक्री नहुँदा करोडौँको घाटा
कुखुराको मासु , अण्डा खान डराउनु पर्दैन : चिकित्सक